Ikhaya > Yonke into ekufuneka uyazi ngeNicotinamide Riboside Chloride
Ukuba ujonga iNicotinamide yemifuno Riboside chloride Ukuxhasa, sicebisa ukuba iCofttek Nicotinamide Riboside yongeze. Inkampani yokuvelisa ijongana kuphela nezongezelelo zeNicotinamide Riboside kwaye ke, umntu unokuqiniseka ukuba izongezo ezenziwe yinkampani zikumgangatho ophezulu kakhulu. Inkqubo ye- Cofttek Isongezelelo seNicotinamide Riboside sivela kwiifomsile ekulula ukuzisebenzisa, ekulula ukuginya. Abasebenzisi bayacelwa ukuba bathathe iphilisi enye kuphela ngosuku.
Nangona kunjalo, ukuba ujonga i-gluten, iqanda, i-BPA, amandongomane, izilondolozo kunye nemveliso engena-bisi, sicebisa ukubeka imali yakho kwisongezo seCofttek Nicotinamide Riboside. Esi songezelelo sidibanisa i-NR kunye ne-flavonoids. Ngokudibeneyo, ezi zinto zimbini zenza umsebenzi we-sirtuin. Okubaluleke ngakumbi, uCofttek ubanga ukuba wenza imijikelo emine yovavanyo kwisongezo ngasinye kwaye ke, izongezo zenkampani zikhuselekile ngokugqibeleleyo. Ukongeza, ezi zongezelelo ziveliswa kwindawo eqinisekisiweyo ye-cGMP kunye nendawo eqinisekisiweyo ye-TGA
INicotinamide Riboside chloride FAQ
Yintoni i-nicotinamide riboside chloride?
I-Nicotinamide Riboside Chloride okanye i-Niagen yindawo ye-crystal yeNicotinamide Riboside, eyi-NAD + eyandulelayo yevithamini. Ngelixa iNicotinamide Riboside inobunzima be-255.25 g / mol, iNicotinamide Riboside Chloride inobunzima abangama-290.70 g / mol kunye ne-100 mg yeNicotinamide Riboside Chloride ibonelela ngama-88 mg eNicotinamide Riboside. I-NR ithathwa njengekhuselekileyo ukuba isetyenziswe ekutyeni.
nangona I-Nikotinamide Riboside luhlobo lweVitamin B3, iipropathi zayo ezahlukeneyo zenza ukuba yahluke kuninzi kwamanye amalungu eqela levithamini B3, njenge-nicotinamide kunye ne-niacin. Ngelixa i-Niacin ibangela ukuba ulusu luhlambe ngokuvula i-GPR109A G-protein edityaniswe ne-receptor, i-Nicotinamide Riboside ayiphenduli kwaphela nale receptor kwaye ke, ayibangeli nokugungxwa kolusu, nokuba ityiwe kumthamo omkhulu we-2000 mg ngosuku. Ngaphaya koko, kuvavanyo olwenziwe kwiimpuku lubonakalise ukuba iNicotinamide Riboside sisandulela se-NAD + esikhokelele kwesona spike siphakamileyo kwiNicotinamide Adenine Dinucleotide okanye iNAD + emzimbeni.
I-Nikotinamide Riboside iyenzeka ngokwemvelo kwindawo yokutya yomntu kwaye kanye ngaphakathi komzimba, iyatshintsha ibe yi-NAD +, ekufuneka umzimba usebenze kuyo imisebenzi eyahlukeneyo. Umzekelo, uphando lwenzululwazi lufakazele ukuba iNicotinamide Riboside Chloride okanye i-NAD + ebonelelwe yi-NR iphucula ukusebenza kwe-mitochondrial kunye nokuziva kwe-insulin ngokwenza iseti ye-mestuin ye-enzyme, enoxanduva lokulawula i-oxidative metabolism emzimbeni.
Kutheni sifuna iNicotinamide Riboside Chloride
Umzi mveliso wezithambiso lushishino lweebhiliyoni zeedola, ikakhulu kuba abantu bayikhathalele indlela abajongeka ngayo. Le ikwangumba ophambili wokuba kutheni uphando malunga nezinto ezichasene nokwaluphala kunye neemveliso zenze inkqubela phambili emangalisayo ngexesha elifutshane. Amahlakani ehlabathi jikelele ayaqonda ukuba kukho imali eyenziweyo ngomnqweno wabantu ngabanye wokuhlala umncinci ngonaphakade kwaye ngenxa yoko, babe namaqela endaweni, bechitha iintsuku kunye neeveki ukufumana izithako kunye neemveliso ezinokuphucula amandla olusu. I-Nikotinamide Riboside okanye iNiagen yafunyanwa ngenxa yolu phando lungagungqiyo kwiimveliso ezichasene nokwaluphala. Ngelixa uninzi lwezinto ezichasene nokwaluphala zinciphisa iimpawu zokwaluphala eluswini, iNiagen inciphisa imiqondiso yokuguga emzimbeni. I-Nicotinamide Riboside okanye i-Niagen yifom yekristale yeNicotinamide Riboside Chloride kwaye kanye ngaphakathi komzimba, iguquka ibe yi-NAD +, ejongene nokuguga okunempilo kunye neminye imisebenzi ebalulekileyo.
Izifundo ezininzi ezenziweyo ukuza kuthi ga ngoku zifumene ukusetyenziswa kweNicotinamide Riboside kuluhlu lwe-1000 ukuya ku-2000 mg ngosuku olukhuselekileyo ukuze lusetyenziswe ngabantu. Nangona kunjalo, kuba izifundo ezingaphezulu zekhonkrithi ziyafuneka kule ndawo, abenzi beNicotinamide Riboside bancomela ukugcina ukutya kwakho kwemihla ngemihla kwe-NR phantsi kwama-250-300 mg ngosuku.
Nangona i-Nicotinamide Riboside okanye i-Nicotinamide Riboside Chloride yokusetyenziswa ikhuselekile, inokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezifana nesicaphucaphu, intloko ebuhlungu, ukuqunjelwa, ukudinwa kunye norhudo. Ukuba ufumana ezinye zeempawu ngelixa uthatha isongezelelo se-NR, ngoko nangoko qhagamshelana nogqirha wakho. Ngapha koko, ekubeni kungekho bungqina baneleyo malunga nefuthe leNicotinamide Riboside kwabasetyhini abakhulelweyo nabancancisayo, eli qela kufuneka liye kude nokusetyenziswa kwezincedisi zeNicotinamide Riboside.
Ngaba nad ukubuyisela umva ukuguga?
Kodwa uphononongo lwakutsha nje lubonakalisile ukuba ukwanda kwe-NAD + emzimbeni kunokubuyisela ukusebenza kwamaselula omzimba ngokungathi kubuyela umva- kuyicothisa inkqubo yokuguga. Ngokusisiseko, amadoda anokuguqula ukuguga ngokubuyisela amanqanaba asempilweni e-NAD +.
Ixabisa malini unyango lwe-NAD?
Ixabisa malini i-NAD +? I-NAD + infusions iqala kwi- $ 749 kwaye inokwenziwa ngokwezifiso ukubandakanya izithako ezivela kwi-MIVM Cocktail. I-Mobile IV Medics NAD + MIVM Cocktail yi- $ 999 kwaye olu nyango lonyango luqulathe iivithamini kunye nezondlo ezinje nge: Magnesium.
Ngaba uNad uyaluphucula ulusu?
Omnye umcebisi wephephancwadi i-C & T uyavuma ukuba: “I-NAD + ibalulekile kwimetabolism yeselula, kwaye ifumana indlela yayo kumzi-mveliso wezithambiso njengendlela yokwandisa amandla eseli yesikhumba. Ingcinga kukuba, ukuba uyawonyusa amandla esikhumba esisele esikhulayo solusu, luya kusebenza ngakumbi njengeseli yolusu encinci kwaye ivelise ulusu olungcono.
Uthe, "Ilebhu yethu ibonakalisile ukuba ukunika iimpuku kwi-NMN ngaphezulu kweenyanga ezili-12 kubonisa iimpembelelo ezichaseneyo nokuguga." Ngokuka-Imai, ukuguqulela iziphumo ebantwini kubonisa ukuba i-NMN inokubonelela umntu ngemetabolism yeminyaka eli-10 ukuya kwengama-20 emncinci.
Ngaba nad ivithamini B3?
Yintoni iNicotinamide Riboside? I-Nicotinamide riboside, okanye i-niagen, yenye indlela ye-vitamin B3, ekwabizwa ngokuba yi-niacin. Njengezinye iintlobo zevithamini B3, inicotinamide riboside iguqulwa ngumzimba wakho ube yi-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), i-coenzyme okanye i-molecule yomncedisi.
Ngaba i-nicotinamide iyafana ne-Vitamin B3?
I-Niacin (ekwabizwa ngokuba yi-vitamin B3) yenye yeevithamini ezinyibilikayo emanzini. I-Niacin ligama elenzelwe i-nicotinic acid (i-pyridine-3-carboxylic acid), i-nicotinamide (niacinamide okanye i-pyridine-3-carboxamide), kunye nezinye izinto ezinxulumene noko, ezinjenge nicotinamide riboside.
Ndingayisebenzisa i-niacinamide mihla le?
Njengoko inyamezelwa kakuhle ngabantu abaninzi, i-niacinamide inokusetyenziswa kabini ngemini yonke imihla. Isebenza ngalo naliphi na ixesha lonyaka nangona ingena ngokukodwa ebusika ngexesha lokubanda, imozulu eyomileyo kunye nokusetyenziswa rhoqo kobushushu obuphakathi. Yisebenzise ekuqhubeni ngaphambi kokuba uqale unyango lwakho lwe-retinol kwaye ecaleni kwayo, nayo.
Ngaba i-niacinamide ibangela ukukhula kweenwele zobuso?
I-Niacinamide inendima ebalulekileyo ekukhuleni kweenwele ezinde nezomeleleyo ngenxa yokujikeleza kwazo ukonyusa iipropathi. Yandisa ukubonakala kunye nokuziva kweenwele, ngokwanda komzimba, ukondla, i-sheen. Ikwaphucula ukwenziwa kweenwele ezonakaliswe ngumzimba / ngamachiza ngokunceda ekwakheni iKeratin.
Yeyiphi i-niacinamide okanye ivithamin C engcono?
Kwaye, "xa sithetha nje, ivithamin C kufuneka isetyenziswe kwi-pH esezantsi ukuze isebenze, ngelixa i-niacinamide isebenza ngcono kwi-pH ephezulu / engathathi hlangothi," wongeza u-Romanowski. (Uhlobo lwayo lokungxama kukuba kutheni uninzi lweevithamini C iimveliso zitsala kwicala lomthengi; sisixhobo esinzima ukwenza kunye naso.)
Ngaba i-niacin imbi kwisibindi sakho?
I-Niacin inokubangela ukuba i-serum aminotransferase ephakame kancinci ukuya kumodareyitha kunye needosi eziphezulu kunye neendlela ezithile ze-niacin zidityaniswe nokubonakala eklinikhi, ukwenzakala kwesibindi okuqinisekileyo okunokuba nzima kwaye kubulale.
Ngaba inicotinamide ilungile kulusu?
I-Niacinamide inciphisa ukuvuvukala, okunokunceda ukunciphisa ububomvu kwi-eczema, i-acne, kunye nezinye iimeko zesikhumba ezivuthayo. Inciphisa ukubonakala kwepore. Ukugcina ulusu luthambile kwaye lufumile kunokuba nesibonelelo sesibini- ukuncitshiswa kwendalo kubungakanani bepore ngokuhamba kwexesha.
Ngaba i-10% niacinamide kakhulu?
I-Niacinamide inokuphucula ukubonakala kolusu lwakho ngokunyanga ukonakaliswa lilanga, ukuthintela ukuqhawuka, kunye nokuphucula imigca kunye nemibimbi. Ukuxinana kweemveliso ze-niacinamide ezikwimixholo inyuka iye kwi-10%, kodwa izifundo zibonise iziphumo ezinesezantsi njenge-2%.
Ngaba isebenza ngokukhawuleza kangakanani inicotinamide?
Ithatha ixesha elingakanani ukuze isebenze i-niacinamide? Uya kuqaphela ezinye iziphumo ngokukhawuleza nangona uninzi lwezifundo kwi-niacinamide zibonise iziphumo emva kweeveki eziyi-8 ukuya kwezi-12. Khangela iimveliso eziqukethe i-5% niacinamide. Leyo yipesenti ebonakalisiweyo ukuba yenza umahluko ngaphandle kokubangela ukucaphuka.
Ngaba i-niacinamide isusa amabala amabala?
I-Niacinamide inokuzinzisa ukusebenza kwe-melanosome ngaphakathi kwiiseli, ezinokuphucula i-hyperpigmentation eseleyo evela kumabala amabala kunye nabo banesifo se-melasma.
Yenza ntoni ivithamini B5 kulusu lwakho?
Ipro-Vitamin B5 inceda ukugcina ulusu luthambile, luthambile kwaye lusempilweni. Inesiphumo sokuchasana nokuvuvukala esinokukunceda ekuvuseleleni iinkqubo zokunyanga ulusu lwakho. Ukuhambisa amanzi nzulu, kuyanceda ukugcina ulusu lucinyiwe ngokufunxa ukufuma okuvela emoyeni (ubuqili!).
Ndingayinyusa njani i-NAD yam ngokwendalo?
Ukunciphisa ukukhanya kwelanga
Utshintsho kwindlela yokutya
Ukuzila ukutya kunye neetosis
Ungayithatha i-NAD ngomlomo?
Ngenxa yoko, izongezo zomlomo ze-NAD azisebenzi kakuhle kune-IV infusions ngenxa yenqanaba labo lokufunxa eliphantsi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izincedisi zomlomo zikhuselekile kakhulu; awukho semngciphekweni wokufumana usulelo njengoko unakho kunyango lwe-IV.
Uthatha ixesha elingakanani ukusebenza?
Izicwangciso zokutya zinokubandakanya ukutya okune-Vitamin okunokwandisa i-dopamine kwaye kunokuvelisa i-NAD kwingqondo. Uninzi lwezigulana zifuna iintsuku ezi-6 ukuya kwezi-10 zokufakwa ukuze uzive iziphumo.
Ngaba iElysium ikhuselekile?
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ixesha elide, ucebisa ukuba umsebenzi wokunyusa i-NAD unokugcinwa kuphela ukuba abathengi bayaqhubeka nokusebenzisa le mveliso. Isiseko seMpilo se-Elysium. Njengesongezelelo, iSiseko sithathwa ngokuba sikhuselekile ukuba singasetyenziswa ngabantu.
Yintoni i-NAD yokuguga?
I-Nicotinamide adenine dinucleotide (i-NAD +) yi-cofactor ebalulekileyo kuzo zonke iiseli eziphilayo ezibandakanyekayo kwiinkqubo zebhayoloji ezisisiseko. … Ubungqina obuvelayo bunyanzelisa ukuba ukunyuka kwamanqanaba e-NAD + kungacothisa okanye kuguqule imiba yokwaluphala kwaye kulibazise ukuqhubela phambili kwezifo ezinxulumene nobudala.
Zithini iziphumo zecicotinamide riboside?
Kwizifundo zabantu, ukuthatha i-1,000-2,000 mg ngosuku akukho ziphumo zibi.
Abanye abantu baye baxela iziphumo ebezingalindelekanga ezimnene, ezinjengezicaphucaphu, ukudinwa, intloko ebuhlungu, urhudo, ukungonwabi esiswini kunye nokugaya.
Uyintoni umahluko phakathi kwenicotinamide riboside kunye nenicotinamide mononucleotide? (2)
Owona mkhulu, kwaye ucace gca, umahluko phakathi kweNMN kunye ne-NR bubungakanani. I-NMN inkulu nje kune-NR, oko kuthetha ukuba ihlala ifuna ukwaphulwa ukuze ilingane neseli. I-NR, xa ithelekiswa nezinye i-NAD + zangaphambili (njenge-nicotinic acid okanye i-nicotinamide) ilawula ngokugqwesileyo ekusebenzeni kakuhle.
Ngaba inicotinamide iyafana neNmn?
I-Nicotinamide riboside kunye ne-NMN ziyafana ngokwamachiza ngaphandle kweqela elinye le-phosphate ekhoyo kwi-NMN. Uphononongo lubonisa ukuba eli qela longezekileyo le-phosphate lifuna i-NMN eyongezelelweyo ukuba iguqulwe kuqala ibe yi-nicotinamide riboside ngaphambi kokuba ingene kwiseli.
Ngaba uNad uyanceda ngokulala?
Amanqanaba e-NAD + anobudlelwane obomeleleyo nomjikelo wokulala kunye nezifo ezinxulumene nobudala. Akukho bungqina ngqo buthe bonisa ukuba i-NAD + isebenza njengehabhu phakathi komjikelo wokuvuka kokulala kunye nezifo ezinxulumene nobudala.
Wenza ntoni uTru Niagen emzimbeni?
Yintoni iTru Niagen? I-Tru Niagen, nguChromaDex, yimveliso yamandla esempilweni enokukunceda uchasane nokuguga ngokubuyisela amandla ukukhula kwamaselula kunye nokulungiswa. Ikwenza oku ngokunyusa amanqanaba akho e-NAD. Uphando lubonisa ukuba i-NAD inceda umzimba wakho ukuguqula izakhamzimba kunye nokutya kube ngamandla, kukonyusa imetabolism.
Yeyiphi engcono iNmn okanye iNAD?
Ngaba iad nad supplements isebenza?
Izifundo zibonisa ukuba ukunyusa amanqanaba e-NAD + kunokwandisa ixesha lokuphila kwigwele, iintshulube kunye neempuku. Uphando lwezilwanyana lukwabonisa isithembiso se-NAD + sokuphucula imiba emininzi yempilo. Ukunyusa amanqanaba emolekyuli kwiimpuku ezindala kubonakala ngathi kuvuselela i-mitochondria -iifektri zamandla eseli, ezithe zawa ngokuhamba kwexesha.
Yintoni kunyango lukaNad IV?
Olunye lonyango olutsha ngokupheleleyo kwicandelo lokufumana iziyobisi lonyango lweamino acid, eyaziwa ngokuba lunyango lwe-NAD IV. I-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) yinkqubo ye-metabolic co-enzyme kwaye ihlawuliswa umsebenzi obalulekileyo wokumisela, ukulungisa, kunye nokulungisa kwakhona zonke iiseli emzimbeni.
Zithini i-NAD booster?
Izikhuthazi ze-NAD zizongezo eziqukethe i-nicotinamide riboside, uhlobo lwe-vitamin B3. Xa uthathwa njengesongezelelo, umzimba uguqula i-nicotinamide riboside ibe yi-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). I-NAD + yicenzenzime ebandakanyeka kwiinkqubo ezininzi zeseli. Njengoko sikhula, amanqanaba e-NAD + emzimbeni wethu ancipha.
Uyintoni umahluko phakathi kweNADH neNAD +?
Ukwenza indima yayo njengomphathi we-electron, i-NAD ibuyela emva naphambili phakathi kweefom ezimbini, i-NAD + ne-NADH. I-NAD + yamkela ii-elektroni kwiimolekyuli zokutya, ziyiguqulela kwi-NADH. I-NADH inikela ii-elektroni kwioksijini, iyiguqulele kwi-NAD +.
I-NMN inkulu nje kune-NR, oko kuthetha ukuba ihlala ifuna ukwaphulwa ukuze ilingane neseli. I-NR, xa ithelekiswa nezinye i-NAD + zangaphambili (njenge-nicotinic acid okanye i-nicotinamide) ilawula ngokugqwesileyo ekusebenzeni kakuhle. … I-NR, nangona kunjalo, ibonakalisiwe ukuba ingena kwiiseli kwisibindi, izihlunu, kunye neethishu zobuchopho zeemodeli zeempuku.
Kukuphi ukutya okuqukethe inicotinamide riboside?
Nciphisa iziselo ezinxilisayo
Kukuphi ukutya okuphezulu kunicotinamide?
Zimbini iintlobo zevithamini B3. Enye ifom i-niacin, enye i-niacinamide. I-Niacinamide ifumaneka kukutya okuninzi kubandakanya igwele, inyama, intlanzi, ubisi, amaqanda, imifuno eluhlaza, iimbotyi kunye neenkozo zesiriyeli. I-Niacinamide ikwafumaneka kwiivithamini B ezininzi ezongezelelekileyo kunye nezinye iivithamini B
Ngaba i-niacin imbi kwisibindi?
Yintoni i-nicotinamide eyenzela ulusu?
I-Nicotinamide esetyenziswa njengeyeza inokunceda ulusu ngeendlela ezahlukeneyo. I-Nicotinamide inezinto ezichasayo ezinokuthi zisetyenziselwe ukunyanga izifo ezixhalabisayo. Inokuphucula amabala ngamanyathelo ayo ngokuchasene nokudumba kunye nokunciphisa i-sebum.
Ngaba i-niacin ilungile kuxinzelelo?
Ngokobungqina be-Intanethi, abantu abanokudakumba okukhulu abaphendula kunyango lwe-niacin bahlala bexhamla kwidosi ephezulu kakhulu, ukusuka naphi na phakathi kwe-1,000 ukuya kwi-3,000 mg. Ngokombhalo wesondlo ka-2008, iMicimbi yokutya, elinye ibhinqa labona ukuba uxinzelelo lwalo luguqulwe nge-11,500 mg yemihla ngemihla.
Zithini iimpawu zokunqongophala kukavithamini B3?
Ukusilela kweVitamin B3 kubandakanya ukukhathala, ukungaginyeki, isicaphucaphu, ukugabha, urhudo, izilonda zomlomo, ukudumba ulwimi olubomvu, ukujikeleza okungalunganga, kunye nokudakumba. Ulusu olunamaxolo oluqhekekileyo olujonga kakhulu ilanga lelinye uphawu lokusilela kwe vithamin B3.
Ngaba umthambo uyayinyusa iNAD?
Kuzo zombini, i-NAD iyacelwa ukuba icuthwe ibe yi-NADH kumjikelo we-tricarboxylic acid, ukwandisa imveliso ye-ATP ngokusebenzisa ikhonkco lothutho lwe-elektron. Ewe, omabini amanqanaba e-NAD kunye nokubonakaliswa kwe-NAD salvage enzyme kwimisipha kubonisiwe ukuba iyanda ngexesha lokuzilolonga.
Ngaba inicotinamide ivithamini B3?
I-Nicotinamide, ekwabizwa ngokuba yi-niacinamide, yindlela enyibilikayo yamanzi ye-niacin okanye i-vitamin B3. Ifumaneka ekutyeni okufana nentlanzi, iinkukhu, amaqanda, kunye neenkozo zesiriyeli. Ikwathengiswa njengesongezo sokutya, nanjengefomu engacinywanga ye-niacin.
Ngaba i-niacin inyusa amanqanaba e-NAD +?
Xela ukuba i-niacin, ivithamini B3, inokuhlangula ngokufanelekileyo amanqanaba e-NAD + kwimisipha kunye negazi lezigulana ezine-mitochondrial myopathy, ukuphucula izifo kunye namandla emisipha. Amanqanaba e-NAD + anyukile nakwizifundo ezisempilweni. Ubungqina bucebisa ukuba i-niacin sisixhobo esisebenzayo se-NAD + ebantwini.
Uyithatha njani iNAD +?
Ukunyusa i-NAD +, thatha i-NADH 5 mg yeepilisi zeelwimi ezincinci. Ukuthintela i-jet lag, thatha i-NADH 20 mg. Ukufikelela kwinqanaba elifanelekileyo le-NAD + fumana i-IV Nic-Nicotinamide adenine dinucleotide infusion ngeveki okanye ngenyanga.
Zithini ii-sirtuins ezisixhenxe?
Ezi "zono" zinegalelo kwiimeko ezisixhenxe ezibulalayo ezonyukayo nokwanda kwabantu abagugileyo (ukutyeba kakhulu, uhlobo lwesifo seswekile, isifo sentliziyo, umhlaza, isifo sengqondo esixhalabisayo, isifo samathambo kunye namathambo). Ii-sirtuins ziludidi lwe-NAD + -i-deacetylases ezixhomekeke kuyo ezinamalungu asixhenxe ebantwini nakwezinye izilwanyana ezincancisayo.
Ndingazinyusa njani iisirtuins zam?
Phakathi kweendlela zokuthintela okanye ukulwa nezifo kukuzilolonga. Ukuzivocavoca umzimba kuchaphazela ngokuqinisekileyo umsebenzi kunye / okanye ukubonakaliswa kwe-sirtuins, okukhokelela ekusebenzeni okungcono kwe-oxidative metabolism, ukwanda kwe-biogenesis kunye nomsebenzi we-mitochondrial, kunye nokugcinwa kwenkqubo ye-antioxidant.
Ndifanele ndiyithathe nini iNiagen?
Iicapsules zingathengwa nokuba yinyanga enye, iinyanga ezi-1, okanye ukunyuswa kweenyanga ezi-3. Inkampani icebisa abathengi ukuba bathathe i-6 yeephilisi ze-2 mg ngosuku kunye okanye ngaphandle kokutya. Njengezingxobo zinokuthathwa nokuba kusekuseni okanye ebusuku kwaye nokuba kungaphandle kokutya.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-TRU Niagen isebenze?
Izifundo zeklinikhi ezixhaswe yiChromaDex zibonisa ukuba i-NR yongeza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo inyusa i-NAD yabantu egazini emva kweeveki ze-6-8. UTru Niagen ubanga ngokuthe ngqo ukuba abantu abathatha i-300 mg ngosuku yokongezwa kweeveki ezisibhozo bonyuse i-NAD nge-40-50%.
Liliphi ixesha losuku ekufuneka ndilithathe ngalo iTru Niagen?
I-Tru Niagen icetyiswa ukuba ithathwe ngexesha elifanayo yonke imihla. Ungayithatha kube kanye yonke imihla kusasa okanye ebusuku, kunye okanye ngaphandle kokutya.
Zithini izithako eTru Niagen?
I-TRU NIAGEN iqulethe i-nicotinamide riboside engafaniyo nemithombo ye-vitamin B3 efumaneka kwiimveliso ze-multivitamin. I-TRU NIAGEN ifunxwa ziiseli kwaye iguqulwe ngokufanelekileyo kwi-NAD isebenzisa indlela eyahlukileyo eyahlukileyo kwivithamini B3 (niacin, nicotinamide) efumaneka kwizongezo zevithamini.
Ziziphi iziphumo ebezingalindelekanga zeNiacinamide?
Ngokungafaniyo ne-niacin, i-niacinamide ayibangeli ukugungxulwa. Nangona kunjalo, i-niacinamide inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezinje ngesisu, irhasi yamathumbu, isiyezi, irhashalala, ukurhawuzelela, kunye nezinye iingxaki. Xa isetyenziswa eluswini, i-niacinamide cream inokubangela ukutshisa kancinci, ukurhawuzelela, okanye ubomvu.
Yintoni ongenakuyixuba kunye ne-niacinamide?
Sukuxuba: I-Niacinamide kunye nevithamin C. Nangona zimbini i-antioxidants, i-vitamin C yenye yezinto ezingahambelaniyo ne-niacinamide. Zombini ezi antioxidants zixhaphake kakhulu ezisetyenziswa kwimveliso ezahlukeneyo zolusu, kodwa akufuneki zisetyenziswe kanye emva kwenye, utshilo uGqirha Marchbein.
Ngaba unokusebenzisa i-niacinamide kakhulu ebusweni?
Xa isetyenziselwa ukugxila okuphezulu, i-niacinamide inokubangela ukucaphuka kolusu kunye nokubomvu. Ukuba kunokwenzeka ukuba ubambalwa ongenathamsanqa onesiphumo esibi kwimveliso ene-niacinamide, kukho izinto ezintathu ezinokubakho: unokungahambelani, kukho esinye isithako esibangela ukucaphuka, okanye usebenzisa kakhulu.
Ngaba i-1000 mg ye-niacinamide ikhuselekile?
Ukunciphisa umngcipheko wale miphumela, abantu abadala kufuneka bakuphephe ukuthatha i-niacinamide kwiidosi ezinkulu kune-35 mg ngosuku. Xa kuthathwa idosi engaphezulu kwe-3 yegramu ngosuku lwe-niacinamide, iziphumo ebezingalindelekanga ezibi kakhulu zinokwenzeka. Oku kubandakanya iingxaki zesibindi okanye iswekile ephezulu yegazi.
I-Nicotinamide Riboside Chloride Dosage
Izifundo ezihlanu eziqhutyiweyo ukuza kuthi ga ngoku zifumanise ukuba iNicotinamide Riboside ikhuselekile ekusebenziseni kwabantu. Nangona kunjalo, ezi zifundo ziseke umda okhuselekileyo weNicotinamide Riboside Chloridedosage yabantu phakathi kwe-1,000 ukuya kwi-2,000 mg ngosuku. Nangona kunjalo, kufuneka igcinwe engqondweni ukuba zonke izifundo ezihlalutye ukhuseleko lweNicotinamide Riboside zazinobungakanani besampulu encinci kwaye ke, uphando oluninzi luyafuneka kule ndawo.
Eyona njongo iphambili yeNicotinamide Riboside Chloride kukubonelela ngeNicotinamide Riboside Chloride okanye iNiagen emzimbeni. I-Niagen okanye i-NR ihlala ifumaneka ngeendlela ezimbini: iipilisi kunye neepilisi. Uninzi lwabenzi beNicotinamide Riboside bongeza NR namanye amachiza, anjengePterostilbene. Ngayiphi na imeko, ukuze ukhuseleke, uninzi lwabenzi bezincedisi bacebisa ukugcina ukungeniswa kwemihla ngemihla kwe-NR phakathi kwama-250 ukuya kuma-300 mg ngosuku.
Izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride
① INicotinamide Riboside Chloride inyusa ukuKhula kweMpilo
I-NAD + eyenziwe yasebenza nguNicotinamide Riboside Chloride ngaphakathi komzimba isebenzisa ii-enzymes ezithile ezihambelana nokuguga okunempilo. Enye ye-enzyme enjalo yi-sirtuins, edityaniswe nobomi obuphuculweyo kunye nobomi bezilwanyana. Izifundo zesayensi zibonakalise ukuba i-sirtuins iphucula umgangatho wobomi kunye nobomi obude ngokunciphisa ukuvuvukala, ukuphucula izibonelelo ezihambelana nokuthintela kwekhalori kunye nokulungiswa kweDNA eyonakalisiweyo. I-NAD + eyenziwe yasebenza nguNicotinamide Riboside Chloride nayo isebenzisa ii-polymerase zepaseji ezaziwayo ukulungisa iDNA eyonakeleyo. Ukongeza, izifundo ezininzi zesayensi zidibanise umsebenzi weepolymerases kunye nobomi obuphuculiweyo.
② Iyanciphisa amaThuba amaNtu okuphuhlisa izifo zeNtliziyo
Ukwaluphala kwandisa amathuba okuba nesifo sentliziyo. Njengokuba abantu bekhula ubudala, imithambo yegazi iya isiba nkulu kwaye iqine, ethi yona ikhokelele kunyuko lwegazi. Xa uxinzelelo lwegazi ngaphakathi kweenqanawa lonyuka, intliziyo kufuneka isebenze nzima ngakumbi ukumpompa igazi, oko kukhokelela kwizifo ezahlukeneyo zentliziyo. I-NAD + ebonelelwe yiNicotinamide Riboside Chloride iyawuguqula utshintsho olunxulumene nobudala obubangelwa yimithambo yegazi. Kukho ubungqina obuninzi benzululwazi bokubonisa ukuba iNicotinamide Adenine Dinucleotide okanye i-NAD + ayinciphisi kuphela ukuqina kwesitya segazi kodwa ikwalawula uxinzelelo lwegazi lwe-systolic.
③ INicotinamide Riboside Chloride Ikwabonelela ngokhuseleko kwiiseli zeBongo
INicotinamide Riboside ikhusela iiseli zobuchopho. Uphononongo olwenziwe kwiimpuku luveze ukuba imveliso ye-NAD eyenziwe nge-NAD + inyuse imveliso ye-PGC-1 alpha protein ukuya kuthi ga kwi-50%. Iprotein ye-alpha ye-PGC-1 inceda ukukhusela iiseli zobuchopho ngokuchasene noxinzelelo lwe-oxidative kunye nokuphucula ukusebenza kwe-mitochondrial. Kungenxa yoko, ukusetyenziswa kwe-NR ebantwini kukhusela kwizifo ezibangelwa bubudala beengqondo, ezinje nge-Alzheimer's kunye neParkinson's. Olunye uphononongo oluthile lwafunda isiphumo samanqanaba e-NAD + kubantu abaneParkinson's. Uphononongo luphelile ukuba i-NAD + iphucule umsebenzi we-mitochondrial kwi-cell stem.
④ Ezinye izibonelelo eziphambili zeNicotinamide Riboside Chloride
Ngaphandle kwezibonelelo kuxutyushwe ngazo ngasentla, Nazi ezinye izibonelelo ezongeziweyo ezinxulumene neNicotinamide Riboside Chloride.
I-NR yaziwa njengokonyusa amandla emisipha, ukusebenza kunye nokunyamezelana kwaye ke, ukusetyenziswa kwe-NR kudityaniswa nokusebenza okungcono kwembaleki.
Njengoko kuchaziwe ngentla, ukuveliswa kwe-NAD + yokulungisa i-NAD + kulungisa i-DNA eyonakeleyo kunye nokubonelela ngokhuseleko kuxinzelelo lwe-oxidative. Oku kuthi, kunciphise amathuba okuba nomhlaza.
Isifundo sihlalutye isiphumo seNicotinamide Riboside kwi-metabolism kumagundane. Uphononongo lwagqiba ukuba i-NR yonyusa imetabolism kwiimpuku. Nangona ubungqina obungaphezulu bezesayensi bufuneka malunga noku, izazinzulu ezininzi zikholelwa ukuba iNicotinamide Riboside inokuba nefuthe elifanayo ebantwini kwaye ke, kufanele ukuba luncede ngokunciphisa umzimba.
Uyithengela phi iNicotinamide Riboside Chloride Powder ngobuninzi?
Imfuno yezongezo zeNicotinamide Riboside inyuke kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo, ikakhulu ngoba uNicotinamide Riboside unezibonelelo ezininzi. Ukuba ujonge ukuthengisa kwimarike yezixhasi zeNicotinamide Riboside, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuzifumana umthengisi onomdla othembekileyo nonokuthenjwa. Kuyiwaphi thenga iNicotinamide Riboside chloride powder ngobuninzi? Impendulo nguCofttek.
Cofttek ngumthengisi wempahla ekrwada eyaqala ukubakho ngo-2008 kwaye kwisithuba nje seminyaka elishumi, inkampani iye yaseka ubukho bayo kumazwe aliqela. Ngaphandle kokuvelisa iimveliso ezinokuthenjwa, inkampani ikwajolise ekwenzeni inkqubela phambili kwicandelo le-biotechnology, itekhnoloji yeekhemikhali kunye novavanyo lweekhemikhali. Inkampani izinikezele kuphando olusemgangathweni, olunika umda ngaphezulu kwabanye abathengisi kwimarike. I-Nicotinamide Riboside Chloride powder enikezelwa yinkampani iza kwiibhetshi ezingama-25 kgs kwaye inokuthenjwa ngomgangatho. Ngaphaya koko, inkampani ineentengiso ezigqwesileyo kunye neqela lenkxaso yabathengi eliya kuthi linyamekele zonke iimfuno zakho kunye nemibuzo ngexesha langempela. Oku, ukuba ufuna ukuthenga iNicotinamide Riboside Chloride powder ngobuninzi, nceda unxibelelane neCofttek.
(1).UConze, D., uBrenner, uC. NoKruger, uKhuseleko lwe-CL kunye neMetabolism yoLawulo lwexesha elide le-NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) kwi-Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Contro-Clinical Trial of Healthy Overweight Adult. Sci Rep9, 9772 (2019)
(2).UCarlijn ME Remie, uKay HM Roumans, uMichiel PB Moonen, uNiels J Connell, uBas Haskes, uJulian Mevenkamp, ​​uLucas Lindeboom, uVera HW de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne ABM Aarts, uEsther Lutgens, u-Bauke V Schomaker, uHungung L Elfrink, URubén Zapata-Pérez, uRiekelt H Houtkooper, uJohan Auwerx, uJoris Hoeks, uVera B Schrauwen-Hinderling, uEsther Phielix, uPatrick Schrauwen, uNicotinamide riboside supplementation alters body composition kunye nomzimba wamathambo acetylcarnitine ogxila ebantwini abatyebileyo, I-American Journal of Clinical Nutrition, Umqu. 112, Imagazini 2, Agasti 2020, iphepha 413-426
U-Elhassan, YS, Kluckova, K., Fletcher, RS, Schmidt, MS, Garten, A., Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, L., Burley, CV, Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas, S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C.,… Lavery, GG (3) ). I-Nicotinamide Riboside yongeza i-Aged Human Skeletal Muscle NAD + iMetabolome kwaye yenza i-Transcriptomic kunye ne-Anti-inflammatory Signature. Iingxelo zeeseli, 28(7), 1717-1728.e6.
(4).I-Nicotinamide riboside chloride powder
(5).Uhambo lokujonga umz.
(6).I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho.
(7).I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(8).Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(9).Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(10).Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(11).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13).Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
(14).Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
Igama loqhagamshelwano Rax
Ndifunda nje ngamachiza akhoyo okucothisa ukuguga, izinto endizifundileyo ukuza kuthi ga ngoku zi-1.Nicotinamide riboside - yamanqanaba e-NAD 2.I-MitoQ, iC60oo, i-PQQ - i-Mitochondrial antioxidants 3.I-Quercetin -Senolitics 4. I-Carnosine-AGE breaker. Andiqinisekanga ukuba icotha ukuguga konke konke, kodwa abantu bayazama oku.
Ngokubhekisele kulusu lwam, ukuxhaswa kwe-NR kuyenze yancipha kakhulu ukuba yome, ngakumbi iinyawo zam ngexesha lasebusika.
I-NAD + ithoba isidima emanzini kwaye nje ukuba igqithe kubushushu begumbi ngalo naliphi na ubude bexesha.
Ngexesha lokufika kwakho kuye kwehla ukuya kwi-zero yiyo loo nto sithatha abaphambili njenge-NR kunye ne-NMN kwaye bobabini basemthethweni be-NAD +.
Nokuba uthatha isigqibo sokuya ngaphi, sukuqala nge-1g. Qala kwidosi esezantsi kwaye ubone ukuba uqhuba njani.
INicotinamide Riboside ngokwayo ayizinzanga ncam.
Ngexesha lokufika kwakho kulindeleke ukuba lihlehliselwe kwi-NAM.
Nangona kunjalo phantse zonke izinto onokuzithenga yi-NR Chloride, ezinzileyo ukuba nje ayimanzi (ngaphandle kwento eyathethwa nguSinclair, oku kungangqinwa ngedatha). Icandelo le-Chloride ye-NR Chloride sisiseko nje sokuqiniswa kwaye kwakamsinya nje ukuba i-NR Chloride ibethe ulwelo (njengesisu sakho) inxenye yeChloride iyaphuma ize i-NR ikhululwe.
I-NR ingumanduleli weNMN, iNMN ingumanduleli weNAD +.
Yonke le nr nampt nmn nad sirt1 crap luhlobo lokudideka kum kodwa kwinto endinokuyiqokelela, nr iguqulwa yi-nampt kwiiseli ezinamanqatha kunye neeseta ze-beta islet kwi-nmn, eguqulwa yenye i-enzyme iye kwi-nad +, kunye nad + idibana ne-sirt1 Ukubangela ukhuseleko kwi-insulin.
I-insulin yinto yokukhula kwaye izisa iswekile kwiiseli, ibangela ukonyusa amandla.
Igama lokuqala Judson lithetha ntoni?
I-Niagen yi-NR-CL, ezinzileyo, enobomi obude, kwaye ayifuni kubekwa efrijini. Andiqondi ukuba kukho umntu othengisa i-NR emsulwa.
Ukongezwa kweveki ye-10 yeveki ye-NR kwakunyamezelwa kakuhle kwaye inyusa kakhulu i-NAD (+) kunye nemetabolites ehambelana negazi labantu abadala abane-MCI. I-NR iphucule i-fMRI kunye nokusebenza komzimba, amanyathelo ethu okuqala kunye nesibini, ngokulandelelana. Nangona kunjalo, umahluko wokuqonda awuzange uphunyezwe kolu phando lincinci lokuqhuba. Iziphumo zethu zibonelela ngobungqina obuxhasayo bokuqhubeka nokuvavanywa kwe-NR njengendlela yokugcina ukwakheka kwengqondo kunye nokusebenza kubantu abadala abane-MCI.?
Ndifunde i-tһiѕ post c-mpletely malunga nokufana kwezinto ezintsha kunye ne-preсeding technoloɡies, linqaku elibalulekileyo.
Ndingu 26 kuphela kwaye emva kokuqala i-NR / NAD + xa bendineminyaka eyi-25, ngoku ndinamandla endiwenzileyo xa ndandineminyaka eyi-13 kwaye ndiziva ndiphinde ndaneminyaka leyo, ii-aches zam zokuzilolonga ziphilisa ngokukhawuleza okukhulu.
Ngokuqinisekileyo yenza into kwaye unyamezelo lwam lunyukile ngoko ke kufuneka lusebenze.